Ibilunge kangakanani iNkosi yamaZulu uNomthebe weSizwe, uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu | Scrolla Izindaba
Ibilunge kangakanani iNkosi yamaZulu uNomthebe weSizwe, uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu
Ngabe iNkosi esikhotheme Ongangezwe lakhe uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu ubengumholi omuhle esizweni sakwaZulu ngesikhathi sokubusa kwakhe iminyaka engama-50?
Ngenkathi abanye bethi uyenze kahle imisebenzi yakhe yobuholi, abanye bakholelwa ukuthi iNkosi ebesihlale isikhathi eside yehlulekile ukuba ngumholi kubantu bayo.
NgeSonto, uMondli Makhanya, ongumhleli ophethe ku-City Press, ubhale incwadi enonya, esola iSilo samaBandla, uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu ngokubambisana ne-National Party eyayibusa ngaleso sikhathi ukubulala abantu abamnyama – okuyisimangalo esichithwa iNdlunkulu.
USifiso Mthembu waseMtubatuba uvumelane noMakhanya.
“Akukho lutho olukhomba noma yini iNkosi engenzele yona noma umphakathi wami. Ubukhosi bakhe abuyishintshanga impilo yami,” kusho uMthembu.
UBhekinkosi Ngcobo waseNquthu uyincomile iNkosi yakaZulu engasekho kanye nemisebenzi yayo.
“INkosi isenzele izinto eziningi njengesizwe samaZulu, njengokukhuthaza izingane zamantombazane ukuba zihlale ziyizintombi zize zishade.”
Uncome iNkosi ngokuhlanganisa isizwe sakwaZulu ngokuletha izinduna ezehlukene ngaphansi kobuholi obubodwa.
UNokuthula Mkhize wase-Port Shepstone e-KZN ukhwele wadilika kulabo abebegxeka iNgonyama yamaZulu.
“Kungani abantu bekhuluma kabi ngenkosi njengoba isikhotheme”?
Nomholi we-EFF uJulius Malema, ugxeke abantu abakhuluma kabi ngeNkosi yamaZulu, iSilo samaBandla wathi bangamagwala.
“Bebelinde ukuthi iNkosi ikhothame ukuze bayigxeke. Bekufanele bakwenze lokhu ngesikhathi iNkosi isadla amabele.”
UMntwana kaPhindangene uMangosuthu Buthelezi, umzala wasebukhosini, uthe labo abakhuluma kabi futhi abagxeka iNkosi bangosomathuba.
Uncome iNkosi ngomsebenzi wayo wokulwa negciwane leSandulela Ngculazi kanye nokuqeda izimpi ebezihlasela isifundazwe saseKZN kusukela ngeminyaka yama-1980 kwaze kwaba sekupheleni kweminyaka yama-90.
Ukukhothama kweSilo samaBandla, uNomthebe weSizwe, uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu nakho sekuholele ekutheni kube noqhekeko mayelana nomuntu ozongena esikhundleni sakhe.
Umndeni wasebukhosini uphebeza zonke izinkulumo ezimayelana nomuntu ozothatha isikhundla senkosi kuze kube iNgonyama yamaZulu iyatshalwa.
UMengameli uCyril Ramaphosa bekulindeleke ukuthi ethule inkulumo yokubonga enkonzweni yesikhumbuzo seNkosi yamaZulu Ongangezwe lakhe, uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu ngoLwesine eNdlunkulu, KwaKhethomthandayo kwaNongoma.
ISilo samaBandla, uNomthebe weSizwe, uGoodwill Zwelithini kaBhekizulu utshalwe phakathi kwamabili ngoLwesine emcimbini wangasese obuhanjelwe ngamadoda ambalwa ngokulandela izifiso zeNkosi.